ပြန်ဖွင့်စဉ်မည်သည့်လမ်းကြောင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရှားရမည်နည်း။ ရိုးရှင်းသော်လည်းအရေးကြီးသောမေးခွန်းများ၊ မတူညီသောလမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။
ဤအရာကိုရယူပါ။ ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ထားသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွင်ပိုစတာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တမင်တကာရှာဖွေ။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင်ကြည့်ပါကကျွန်ုပ်ရရှိသည်။
ဒါကကျွန်မကိုတကယ်နှိုးဆွပေးတဲ့ပုံရိပ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့စွဲလမ်းမှုကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာ (နက်နက်နဲနဲရွေးချယ်မှု) ။
ကျွန်ုပ်သည်ကြော်ငြာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာမရှိပါ၊ ၎င်းသည်အော့ဖ်လိုင်းရှိနေသရွေ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား (LINK)
ဒီကိုကြည့်ပါ video - Rebooting: Relapse ဆိုတာဘာလဲ။ - နော Church ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်.
အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျတက်ကြွစွာအားလုံးရှာကြံကိုရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ် ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော သင့်ရဲ့ reboot စဉ်အတွင်းလိင်လှုံ့ဆော်မှု။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခဲ့ပါက၊
ဒီလောက်ထူးဆန်းတာကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်လိုညစ်ညမ်းတာဘာမှမရှိဘူး။ ဦး နှောက်ကအရက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူဆိုတာကိုအတိအကျသိပေမယ့်ဆုချီးမြှင့်တဲ့နေရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမှတ်မိဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ အစား၊ ဦး နှောက်၏မြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်မြင်ကွင်းများ၊ အသံများ၊ အနံ့များနှင့်အမှတ်တရများနှင့်သက်ဆိုင်သောအာရုံကြောများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤအလွန်ရှုပ်ထွေးသောအချက်ပြမှုများ၏စွမ်းအားကတိုင်းတာသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည် သင့်ရဲ့ ဆုဆားကစ်။ တကယ်အရေးကြီးသည်မှာ dopamine (နှင့်အခြား neurochemicals) ဆုလိုင်းများသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မဟုတ်ပါ။
သော့ချက်မေးခွန်းများကို: သင်၏အပြုအမူပြန်လည်အသက်သည် sensitized စွဲလမ်းကြောင်းသင်သည်သင်၏ numbed dopamine စနစ်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းနေပါသလား။ (ဖတ်ပါPorn, then & Now: ဦး နှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှကြိုဆိုပါသည်"နှင့် အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? အကြောင်းအရာထက်စာရင် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အတည်ပြုခြင်း” သို့မဟုတ်“ ပြန်လည်သက်ရောက်ခြင်း” သို့မဟုတ် X, Y သို့မဟုတ် Z တို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းရှိမရှိနေ့စဉ်မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ မရပါ။ ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းကတော့“ ဘယ်လို ဦး နှောက်လေ့ကျင့်မှုမျိုးကငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာစွဲလမ်းမှုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေနိုင်သလဲ။ ငါထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေတာလား” ဖြစ်တယ်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ တစုံတရာကိုမတော်တဆထိတွေ့ခြင်းသည်ပြန်လည်မသက်ရောက်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပုံရိပ်များကိုမဆိုပြန်လည်တည့်မတ်ပေးနိုင်သည်ကိုအလေးအနက်သံသယဖြစ်မိသည်။ တစ် ဦး စွဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသည်သူ၏စွဲလိုက်ရှာသည့်အခါအာရုံခံစားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါယာကြိုးများကိုတက်ကြွစွာရွေးချယ်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကို၎င်းကိုဆေးထိုးရန်မလိုဘဲထိုးသွင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးကိုရှာဖွေခြင်း (သို့) အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ပင်မစွဲလမ်းမှု ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်အရာ - sensitization ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် အပြည့်အဝစွဲကြသည်မဟုတ်သောသူတို့အား၌တည်၏။ တိရိစ္ဆာန်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကို၎င်း၏တမင် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၊
တက်ကြွစွာ Facebook ကိုရှာဖွေနေကိုသက်ဝင်နေပါသည် sensitized စွဲလမ်းကြောင်း သင်၏အွန်လိုင်းစွဲလမ်းမှုကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း။ Hard-core ပုံရိပ်တွေကိုခုန်လိုက်တာနဲ့ page ကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်တာကတကယ်တော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့စွမ်းအားကိုအားကောင်းစေပါတယ်။ အကယ်၍ အရက်သမားတစ် ဦး သည်ဝိုင် ၁ ခွက်ဖန်ခွက်ပြီးလျှင်အလွယ်တကူရပ်နိုင်လျှင်သူ၌ပြnoနာမရှိပါလိမ့်မည်လော။ (ကြည့်ပါ ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုကာကွယ်ခြင်းကုထုံး (မျိုးသုဉ်း) ) ကပိုသည်။
ယူပါ-ကွာ: ချိတ်ဆက်ရှောင်ကြဉ်ပါ တမင်ရှာ နှင့် arousal ။ မတော်တဆတစေ့တစောင်းကိုရွေးချယ်မထားပါ သို့သော်၊ သင်မြင်သောပုံတွင်နေခြင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအရာကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပုံများကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
အဆက်မပြတ်ပါဝင်ပေါ်လာကြောင်းမေးခွန်းများကိုအမျိုးအစားများ, "ဒါဟာ OK ကိုလား
Surf Facebook က?
R ကိုရုပ်ရှင် Watch?
ရေကူးဝတ်စုံ ၀ တ်စုံရှိမိန်းကလေးငယ်များကိုလှည့်စားပါ။
ငါညစ်ညမ်းတဲ့ Pop-up ကိုမွငျလြှငျ,
ပူပြင်းတဲ့ဗီဒီယိုများအတွက် YouTube ကို Surfed?
2 မိနစ်များအတွက် porn site ကို Visited?
တစ်ဦး PG-13 လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုကြည့်နေစဉ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူကစား?
အဆိုပါစာရင်းအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာစိုစွတ်သောအိပ်မက်များသည်ပြန်လည်မသက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက်ထိုသို့ပင်မသွားပါနှင့်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ relapse လိင်၊ စားသောက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်းစသည့်သဘာဝဆုကျေးဇူးများရရှိခြင်း။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုမှပြန်ကျန်းမာလာခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုမှအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့ပြန်ရောက်သွားခြင်းနှင့်လုံးဝမတူပါ။ ဓာတုစွဲလမ်းမှုသည်အမည်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ ဘဝအတွက်သောက်စားခြင်းသည်အရက်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်လိင်မြင်ကွင်းများ၊ sexy အမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ပုံများသည်သင်၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ မင်းပြန်လာပြီလို့မင်းယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မင်းကပြန်ရပြီ။ ပြီးတော့ porn-free မြင်းကိုပြန်ရအောင်။
သင်၏ကောင်တာကိုတစ်ရက်သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်မလိုကိုမမေးပါနှင့်။ နေ့ရက်များကိုရေတွက်ခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်သာဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ တစ် ဦး ကအလွန်ဘုံမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် "ဒီ relapse ကျောနေ့ကတဦးတည်းမှငါ့ကိုထားပါဘူး?” ဒါမှမဟုတ်ငါရရှိခဲ့အရာကိုအားလုံးဆုံးရှုံး?” သင့် ဦး နှောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြည့်နိုင်သော်လည်းရိုးရှင်းသောအဖြေမှာဖြစ်သည် အဘယ်သူမျှမ။ သင်ရရှိသောအကျိုးအမြတ်ကိုအရက်သောက်ခြင်းနှင့်မဖျက်နိုင်ပါ။ သင်ပြန်လည်စတင်သည့်အခါတိုင်းသင်၏ abstinstens ၏အရှည်ပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ porn စွဲလမ်းမှုမှပြန်ကောင်းလာသူအားလုံးနီးပါးသည်ပြန်လည်အသက်ဝင်နေကြောင်းသတိရပါ။ ဗီဒီယိုကောင်း “ ငါပြန်ရောက်လာပြီ။ ငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုအားလုံးကိုငါပြန်ဖျက်ပစ်လိုက်သလား?”
အရက်တစ်မျိုးသည်ဘီယာအနည်းငယ်သောက်ရန်အဘယ်ကြောင့်မလိုသနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအဲဒီအတိုင်းအတိအကျသက်ဝင်စေမှာပါ sensitized လမ်းကြောင်း မိမိအအရက်သေစာစွဲသည်။ တစ်ဦးက sensitized အာရုံကြောလမ်းကြောင်း ကိုယ့်အားကြီးသောမှတ်ဉာဏ်ထက်ပိုပါတယ်။ အကဲဆတ်ခြင်း activation ပဉ္စမဂီယာသို့ဆုလာဘ် circuitry shoves, နှင့်တိုကျရိုကျ cortex (Self-ထိန်းချုပ်မှု) ၏ဘရိတ် loosens ။ တောင်မှ2sips မှာအရက်မှတ်တိုင်များလျှင်, လမ်းကြောင်းယခုပြန်လည်သက်ဝင်ကြသည်နှင့်ပိုပြီးအဘို့ပဌနာကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ သူကတိုးလာမတရားသောနှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။
ငါကအလွန်ရှည်လျား dopamine နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖတ်တာမဟုတ်တော့ကြာအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံပြင်များ, အချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာညစ်ညမ်းထက်ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်ရှာပါ။ သူတို့ဟာမကြာခဏရေးသားသူတစ်ဦးပြင်ဆင်ချက်အဘို့အပြန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ခုအဆုံးမဲ့လိုအပ်မှဦးဆောင်ပေါ်မှာ, တည်ဆောက်ခြင်းစောင့်ရှောက်သောအစိတ်အပိုင်းမျိုးစုံကိုသို့တက်လည်းကျိုးနေကြသည်။
ဗွီဒီယိုထဲမှာဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့ရိုက်ချက်အတွက်နာရီပေါင်းများစွာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာဟာစိတ်မကောင်းစရာလို့ထင်လား။ စကားလုံးများဖြင့်လှပသောဤ“ ပြီးပြည့်စုံသော” မြင်ကွင်းကိုရှာဖွေကြည့်ပါ။ စာမျက်နှာ ၂၀ ပါ ၀ င်သောဇာတ်လမ်းတွင်ဝါကျတစ်ကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်ထိုယားယံမှုကိုခြစ်ရာကျလိမ့်မည်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ခုကော။ လာမယ့်တစ်နှစ် .. ငါ့ဘ ၀ ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဟာအတုအယောင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာပြင်ဆင်မှုကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်။ သက်ပြင်းချ
သင်ကိုယ်တိုင်မေးရန်လိုအပ်ပါတယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: “ ငါ့ရဲ့အပြုအမူတွေ၊ အပြုအမူတွေကငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတုပသလား။ ” သို့ဆိုလျှင်သင်သည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောစွဲလမ်းများကိုပြန်လည်အသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ သင်သာလျှင်ဤမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်သည်။ Facebook သည်ကျွန်ုပ်ကြားရသောဘုံဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများသည် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတူပင် MO (စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်း) ကိုအတုခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှာဖွေခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေရန် (လူကိုယ်တိုင်အစစ်အမှန်သူများနှင့်မဆက်သွယ်ပါ) သူတို့ရဲ့ desensitized ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ရန်။ သို့မဟုတ်ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်“ ငါကအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်အတွက်အတုလှုံ့ဆော်မှုကိုငါအစားထိုးသလား” ဟုမေးပါ။
ပိုပြီး porn စွဲတူသောအရာဇာတ်လမ်းဖြစ်သနည်း
လုံးဝအဝတ်ကိုဝတ်သောအမျိုးသမီးနှင့်အတူလိင်စိတ်ကူးယဉ်နေချိန်မှာသင်ရုပ်ပုံထံမှရုပ်ပုံဖို့ကိုနှိပ်ပါအဖြစ်, ချိန်းတွေ့ site ကို surfing ။
တစ်ဦး nudist ကိုလိုနီတစ်ခုနေ့လည်ခင်း?
သင်တန်းနံပါတ်တစ်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုသည်အဝတ်အချည်းစည်းမဟုတ်ဘဲအသစ်အဆန်းကိုစွဲလမ်းစေသည်။ အတုအသစ်အဆန်း။
“ Porn” - အမျိုးအစားအားလုံး။ သင်မေးရန်လိုအပ်ပါကအဖြေမှာ 'မကောင်းသောပြောင်းရွှေ့ခြင်း' ဖြစ်သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ်: အတု vs အစစ်အမှန်။
သင့်ညစ်ညမ်းစွဲတူတဲ့ကြောင့်အပြုအမူတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဘယ်များသောအားဖြင့်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်များအတွက်ဒြပ်နှင့် Two-ရှုထောင်အစားထိုးကြောင့်အပြုအမူတွေကိုဆိုလိုသည်။
ပုံနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Facebook မှာ, YouTube သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ surfing Lite ဘီယာတစ်ခုအရက် switching ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောလမ်းကြောင်းများကိုဖွင့်ပေးသကဲ့သို့၎င်းကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
“ ခေါ်ဆောင်သွားသော” ပုံပြင်များကိုဖတ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှုဖြစ်သည်
“ တကယ့်မိန်းမတွေအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နေတာလား။ ” ပြောဖို့ခက်ပါတယ် အကယ်၍ သင်သည်ညစ်ညမ်းသောဇာတ်လမ်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနေလျှင်၊ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအောက်တွင်ဖတ်ပါ။
အချို့အတွက်လက်တွေ့ဘဝစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်ဆန်စေပြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်သင်၏ reboot လုပ်နေသောအချိန်တွင်၊ လက်တွေ့ဘ ၀ မိတ်ဖက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိပြီး ဦး နှောက်ကို“ မှန်ကန်သောကမ္ဘာ” သို့ပြန်ပို့ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်များသောအားဖြင့်လိင်အတွေ့အကြုံနည်းသောလူငယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ (ကြည့်ပါ အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းကူးယဉျကော?)
ဒီယောက်ျားလေးကနောက်ဆုံးမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနှေးကွေးစေခဲ့တယ်။ အသက် ၂၄ - ED ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါတောင်မှထင်ခဲ့ရင်တောင်ပျောက်ကင်းသွားတယ် (၂၀ လ)
“ ခွင့်ပြု” ခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းသည်လက်တွေ့ဘ ၀ ပါတနာနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်။ ပင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်ထားပါသည်, ထိ, Smooching နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှု။ အတော်များများကယောက်ျားတွေအကြံပြု အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ရှား ပထမဦးဆုံးမှာအဖော်နှင့်အတူ, သင်မူကားရှိပါကတကယ့်, သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အပေါ်မူတည် porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, သင်လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏။ စိုက်ထူကြီးတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွအားဖြင့်အတင်းအကျပ်မရသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဖြစ်ပျက်လျှင်သူတို့ဖြစ်ပျက်။
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုသူလိုချင်တာမှန်သမျှကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားအမှားဘာမှမရှိဘူး။ ယခုမူကားသင်သည်အထိန်းအချုပ်မရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဦး နှောက်လေ့ကျင့်မှုကိုပျက်ပြားစေရန်ကြိုးစားနေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွက်သားများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏စိတ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်လမ်းညွှန်ရမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်းမမှားပါ။
ရေစီးဆင်းသည့်နေရာတိုင်းတွင်၎င်းသည် Ruts ကိုဖန်တီးသည်။ မင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေဘယ်မှာစီးနေတာလဲ ဒါကကျိုင်းကောင်သမားများအတွက်သင်ခန်းစာပဲ။
Redditor တစ် ဦး က“ ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်:
ဤ post တွင်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မဟုတ်သည့် YBOP သို့မဟုတ် Ted ဗီဒီယိုများကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ “ Hot Girls Wanted” ပထမဆုံးထွက်လာသည့်အချိန်တွင်နောက်တွဲယာဉ်တိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးထုတ်လုပ်သူနှင့် (၅) မိနစ် (ခန့်မှန်းခြေ) အင်တာဗျူးကိုကြည့်လိုက်သည်၊ ၎င်းမှဗီဒီယိုတိုများပြသည်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီဟာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မျိုးပါ။
ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တည်ရှိတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းရုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောအဓိကအရာဖြစ်လာသည်။ လူအများစု (ငါ့လူမျိုးစုမှလူများ၊ လူမှုရေးတိုးတက်မှုရှိသူများအပါအ ၀ င်) ကဘာမှမမှားပါဟုထင်ကြသည်။ ဤသာမန်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်ယင်းကိုကြည့်ခြင်းမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အပြည့်အ ၀ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောငါ့စွဲလမ်းမှုကိုကောင်းစွာသိပြီးဤကဲ့သို့သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များကိုကြည့်သောအခါဤဖြစ်ပျက်သည်ကိုသိရန်လုံလောက်သည်။
၁။ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေး၊ ဗီဒီယို၏ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ရှုထောင့်ကကျွန်ုပ်ကိုအထင်ကြီးစေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ဘာမှမသင်ယူဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်မညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို assholes တွေကထုတ်လုပ်တာကိုငါသိပြီးသားပါ။
2) ငါ့ကိုအဆိုပါ porn စှဲလမျးသူ porn အပေါငျးတို့သထောင်ချောက်အသုံးပြုပုံအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆူညံသံများက, အကင်မရာများနှင့်စုံအသုံးပြုပုံကတော့ pixels ်ဗလာဖြင့်ရေးဆွဲနေပါတယ်။ ငါ၏အစွဲမှ, တစ်ဦးညစ်ညမ်းထား၏ရှေ့တော်၌ထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ထို့နောက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများစတင်သည်။ အမှန်တကယ်ပြပွဲပြဇာတ်သမားများပြုလုပ်သောတကယ့်အိမ်လုပ်ဗီဒီယိုများ။ သူတို့ထုတ်လုပ်မှုတွင် assholes မရှိပါ။ သက်ကြီးအမျိုးသမီးများပါဝင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သေချာတာပေါ့၊ သူတို့ဟာအသက်ကြီးရင့်လာပြီ၊ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ X မှပေါက်ဖွားသည်လိင် - အပြုသဘောနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရထုတ်လုပ်ထားပါသလား။ ဟုတ်လား ညာဘက် ???
ဤအရာများတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကအလွဲသုံးစားလုပ်တာဆိုတော့မင်းကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား။ ဒါကိုကြည့်ချင်တဲ့မင်းရဲ့အပိုင်းကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။
"အစပျိုးနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုသင်မကိုင်တွယ်နိုင်လျှင်ကုသစရာမရှိပါ။ ”
တကယ်ပါပဲ။ ငါတို့သည်စွဲသူတို့ကိုကိုင်တွယ်အဖြစ်သောလမ်းပျောက်သူတို့ထံမှနေဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုအအားနည်းစေသည်သောအရာရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခံ့ကိုယျ့ကိုယျကိုစောင့်ရှောက်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာကွာဝီလီ nilly ကကိုယျ့ကိုယျကိုဖျောထုတျနိုငျခဲ့ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအားနည်းနေစေသည်သောအရာထဲကနေနေဖို့ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းပါဝင်ပါသည်။ porn စွဲဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲကနေဝေးနေဖို့သင့်တယ်
Threads -အဆိုပါ "အဘယ်သူမျှမ arousal"နည်းလမ်း - ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်၏ Celibacy
“ ပြန်လည်နာလန်ထူလာတာနဲ့အမျှငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေ၊ ဒါကငါ့ကိုတကယ်နှေးကွေးစေတယ်။ "
သင်သည်အဘယ်သို့ porn ကိုစဉ်းစားသလဲ?
ကျွန်မစဉ်းစားပါ (တစျခုအဖြေ) အားလုံး porn ဖြစ်။
ဘောင်းဘီတိုတွေမှာကခုန်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ YouTube ဗွီဒီယိုကြည့်ရတာဘယ်လိုလဲ။ ထိုအ ...
ဝက်ဘ်ကင်မရာများ၊ ဖုန်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အစဉ်မပြတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များကိုဖတ်ခြင်း၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းပရိုဖိုင်းများကိုရှာဖွေခြင်း (အဆက်အသွယ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ)၊ ဂူဂဲလ်ရုပ်ပုံရှာဖွေမှုတွင် pornstar အမည်များရိုက်ခြင်း၊
ဤလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသင်၏စိတ်အားတက်ကြွစေလိမ့်မည်။ သူတို့ကသင်အားနည်းနေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိုအားဖြည့်ပေးတယ်။ သူတို့သည်သင်၏အတွေးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများ၊ tits များ၊ မြည်းများ၊ fucking များ၊ ချွတ်ထွက်သွားခြင်းများ၊ အမွေးပူများစသည်တို့ဖြင့်သိမ်းပိုက်ပြီး၎င်းသည် rebooting ကို ပို၍ ခက်ခဲပြီးနာကျင်စေသည်။ သူတို့သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။
သငျသညျ (ရက်စွဲများကို set up ချဉ်းကပ်မိန်းကလေးငယ်များ, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူပရောပ, အဆက်အသွယ်သူငယ်ချင်းမှန်မှန်ထွက်သွားပါ) အလောင်းတော်ထားရရန်ကြိုးစားသို့မဟုတ်သင်လိင်မှလုံးဝမသက်ဆိုင်သောတစ်ခုခုလုပ် (အလုပ်, လေ့လာမှု, လေ့ကျင့်ခန်းထွက်ဆွဲထား, ရုပ်ရှင်များကြည့်ရှု) ဖြစ်စေ။
အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်းငှာကွိမျထွက်စစ်ဆေးနေဒီမီးခိုးရောင်ဧရိယာဘာမျှမပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်။ မြေတပြင်လုံးစိတ်ကူးဝေးကြောင်းအတု / စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာမှနှင့်သို့ရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ် အမှန်တကယ်ကမ္ဘာက.
သင်သည်အွန်လိုင်း bikini galleries အချို့ကိုကြည့်ရှုမည်ဆိုလျှင်သင်“ ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာမည်” ဟုမပြောပါ။ ငါပြောနေတာကတော့မင်းဟာသူတို့ကို porn လိုဆက်ဆံပြီးသူတို့နဲ့ဝေးဝေးနေသင့်တယ်။ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အတွက်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည် (အစစ်အမှန်မိန်းကလေးများ၊ စစ်မှန်သောလိင်၊ စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေး) ။
r / nofap ချစ်ခင်ရပါသောဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီလော
ငါ (3 နှင့်လွန်ခဲ့လခွဲခန့်) ဇူလိုင်လအတွင်းစတင်
ငါ 60-70 အကြိမ်တစ်ဦးခမ်းနားစုစုပေါင်းပြန်ရောက်သွားတယ်။
အရှည်ဆုံး Streak4ရက်။ (ငါကဂုဏ်ယူတယ်)
ဒါဟာအလုပ်တွေအများကြီးကြာပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီးလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ငါဒီအောင်မြင်သောသို့မဟုတ်ပြီးမြောက်ဖို့အနီးကပ်ဘယ်မှာမျှဖြစ်၏။
သို့သော်လည်းငါသည်ယခင်ကထက်ဒီမှာပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုကောင်းခံစားရသည်။2ရက်ယခုအချိန်တွင်ငါ့အဘို့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ရက် ၃၀ ကိုတကယ်မျှော်လင့်နေပါတယ် အဆိုပါစိတ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ဤလတွင်။ ငါ ၇ ရက်လောက်ယုံကြည်မှုရှိတယ် ဒါကိုငါအရင်ကမခံစားဖူးဘူး
မခံနိုင်သောခံစားချက်ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းနှင့်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်လုံလောက်သောခွန်အားရှိခြင်း။ ကိုယ့်စပ်စုတယ် အခြားသူကဒီအများကြီးပြန်ပြောပြ?
ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိရောက်ရန်တစ်နှစ်နှင့်ငါးလကြာသည်။ ငါထိုက်တန်သော Streak အပေါ်ရသည့်အခါတိုင်းငါလိင်ပေါက်ကွဲချင်ခဲ့တယ်တူသောငါခံစားရတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အင်အားကြီး၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ နိုးကြားမှု၊ လူတွေနဲ့ပိုပြီးစကားပြောနိုင်ခြင်းစသည်တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့ libido ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ငါကမိန်းကလေးတွေကိုမေးတာထက်ပိုပြီးအားစိုက်ထုတ်နေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးတွေလိုချင်တာကလိင်ပဲ။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်လှည့်စားခဲ့သည်ကိုငါသိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် porn ကိုစွန့်ခဲ့ပေမယ့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာပုံများနဲ့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ “ Top 10 bikini” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ r4r၊ craigslist ချိန်းတွေ့မှု၊ gonemild ။ အားလုံးဟာတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပြန်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးတစ်ပတ်တွင်ကျွနုပ်၏ကြက်ညှာမှအအေးမိသွားသည်။ ငါသိတဲ့အစစ်အမှန်ဘဝရှိမိန်းကလေးများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ (အဲဒီလိုဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်။ )
ထိုအငါ့သူငယ်ချင်းတွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးမီဒီယာများ၏အင်တာနက်စီးဆင်းမှုကိုသင်ရပ်တန့်ရမည်။ စတိုးဆိုင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတောင်မဂ္ဂဇင်းတွေပေါ်မှာစူပါမော်ဒယ်တွေကိုမမြင်ဘဲနဲ့ထွက်ကြည့်လို့မရဘူး။ ငါတို့ဘ ၀ ၌ဘုရင်တစ်ပါးရှိခဲ့ဖူးသောတစ်နေ့တာတွင်မိန်းကလေးများ၏ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အမှိုက်သရိုက်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်နေ့ ၄၀-၅၀ ခန့်မှာ (?) အားလုံးသည်ကုန်းမြင့်ပေါ်သို့တက်လာတယ်။ ငါနိုးလာပြီးအမ်ကို 40 တုန်ခါနေတယ်။ ငါကမနက်မှာဖုတ်ကောင်မုဒ်ထဲဝင်ခဲ့ရင်တောင်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ဖို့လိုတယ်လို့ငါမခံစားရဘူး။
ဤရွေ့ကား, ငါနှစ်များတွင်ငါခံစားခဲ့ရသောအကြီးမားဆုံးကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၅ မိနစ် fap အစီအစဉ်သည်နိုးထပြီးရှင်းလင်းသော၊ လွယ်ကူသောစိတ်၊ အရူးလိုစိတ်မရှိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ သင်ဤ flatlining ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်၎င်းကို“ NORMAL” ဟုခေါ်သည်။ ဘ ၀ သည်ဆုတစ်ခုရရှိရန်စွမ်းရည်ထက်ပိုသည်။ လေးလေးနက်နက်ပြောရရင်သင်မှန်တဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အခါပြန်လာလိမ့်မယ်။ အသက် ၂၈ နှစ် - စွမ်းအင်၊ အာရုံ၊ နိုးကြားမှု၊
တစ်ဦးက relapse တစ်မဆိုလိုပါ complete ပြန်လည်သတ်မှတ် အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခိုက်ပါနှင့်။
NoFap အပေါ် thread "porn" ကိုအခြားလိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်အစားထိုးအကြောင်း
ဝက်မြည်းကို mode ကို၏အန္တရာယ်များ
မင်္ဂလာပါ၊ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာနှင့် porn / masturbation စွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုမျှဝေချင်သည်။
ငါ NoFap လုပ်နေတာနှစ်ပေါင်း 1,5 လောက်ယခု။ ငါအများစုလိုစတင်ခဲ့တယ် - ရက်ပေါင်း ၉၀ သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်၊ ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားခဲ့ရတယ်၊ မအောင်မြင်မှုနှစ်ခုပြီးတဲ့နောက် hard mode ကိုသွားမယ့်အစားငါဟာပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဘယ်တော့မှ porn ကိုဘယ်တော့မှ fap ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး၊ ပြီးတော့ဒီကတိကဝတ်ကိုရက် ၉၀ လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုနှစ်ကြိမ်သာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ နေ့)
ထိုအခါကကျနော်မှားကြောင်းငါ့အပေါ်မှာအရုဏ်မှစတင်ခဲ့နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ် deluding ခဲ့သည်။ ငါရိုးရှင်းစွာညစ်ညမ်းဘို့စွဲလမ်း erotica သစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုအစားထိုးသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါရုပ်ရှင်ကားများကိုမကြည့်တော့သည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအခြားလှုံ့ဆော်မှုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် - ငါကအကြောင်းပြချက်တွေကိုစဖတ်တယ်၊ လိင်အကြောင်းပြောဖို့လူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ chat ခန်းတွေဆီကိုစလေ့လာခဲ့တယ်၊ စကြည့်ခဲ့တယ်။ gonewild တွင်သို့မဟုတ်အခြားသူများ၏လိင်ဘဝအကြောင်းဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပါ။ ငါသည်လည်းအခြားအမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။ ငါ porn မပါဘဲ fapping အဆင်ပြေသည်ဟုထင်ခဲ့သည်ကတည်းကငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤအသစ်သောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်။ ထိုနေ့အကုန်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကကဲ့သို့ fap စတင်လေ့ရှိကြောင်းပြီးခဲ့သည့်လကသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇူလိုင်လတွင်တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်နီးပါးအဖြစ်မှန်ခံခဲ့ရသည်။ “ စိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အရူးလုပ်နေတယ်။ ဒါကအပြစ်မဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ပဲ၊
ထို့နောက်မကြာသေးမီကစိုးရိမ်စရာအကြောင်းတစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်လာသည်။ ဤ erotica အမျိုးအစားအသစ်များသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကဲ့သို့အလားတူသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါသတိပြုမိတာကကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူလိင်ဘဝရဲ့အရည်အသွေးကျဆင်းလာတယ်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့အစာကိုစားရင်းနဲ့ငါ့မှာပြproblemsနာတချို့ရှိတယ်။ ငါလိင်နှင့်ရငျးနှီးအကြောင်းကိုမသက်မသာခံစားရတယ်။
တစ်နည်းပြောရရင်ကိုယ့် ဦး နှောက်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့၊ အညီအမျှစွဲလမ်းစေမယ့်လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောင်းလိုက်တာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေ၊
ဖြန့်ဝေ၏နည်းလမ်းအကြောင်းအရာသကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်မည်အကြောင်းအောက်ပါအကောင့်ပျေါလှငျ။ ဆွဘို့အ surfing, ဆွဘို့အ surfing ဖြစ်ပါတယ်။
ငါအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ။ ငါမှာလိင်စိတ်နှိုးဆွသော ED ရောဂါစွဲကပ်နေပြီး၊ ၎င်းမှာလုံးဝမထနိုင်ခြင်း၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၌မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျပြီးနေ့စွဲတစ်ခုတွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး အားမေးမြန်းနိုင်သည့်တိုင်လိင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ ငါရင်းနှီးသောအဆက်အသွယ်ကြောက်လန့်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုလိုလားသော်လည်းအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အပြဿနာများငါ၏အ PMO အလေ့အထနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိခဲ့ကြောင်းထင်ပေမယ့်မကြာသေးမီကသည်အထိတစ်ဦးမျှမအစစ်အမှန်သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်။ တစ်ခါတလေ porn စွဲလမ်းသောအထောက်အထားရှာနေ, ကို web ကိုရှာဖွေ, ဒါပေမယ့်ငါဘာမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်တနေ့ငါကျပန်းပိုက်ကွန်သင် browse နှင့်မတော်တဆ yourbrainonporn.com တွေ့ရုတ်တရက်အရာအားလုံးသဘောမျိုးလုပ်လာတယ်။ ငါပုံပြင်တွေ၏တွေအများကြီးထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါတူအပြုအမူပုံစံများ, တူညီတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါဟာငါ porn စွဲခဲ့တော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင်ပင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လွင့်တင်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဘဝတစ်ခုစတင်ရန်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စက်ကိုပြန်လည်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ငါလုပ်ခဲ့တယ် ငါပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့၊ ဂျာနယ်တွေစပြီးနေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာနိုးထလာတယ်။ ငါအရမ်းအလေးအနက်ထားတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သည် (ငါအရင်နှစ်ထက်ပိုပြီးစတင်ခဲ့ rebooting နှင့်မဆက်စပ်) ။
ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်ငါနာရီပေါင်းများစွာတစ်ရက် (ကျနော်အိမ်ပြန်ထံမှအလုပ်မလုပ်) အတွက်ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ဖို့လိုအပျအချိန်မှာတောင်ရှိခိုင်ခံ့သောမတရားသောနှင့် horniness ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ငါကအလွယ်တကူသူတို့အပေါ်မှာရဖို့နိုင်ခဲ့သည်နိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အပတ် ၂-၃ ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အလွန်နိမ့်ကျသောမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊
အပတ် ၄ ။ ရောဂါလက္ခဏာများသည်နည်းနည်းအားနည်းလာသည်။ libido သည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ တစ်နေရာလုံးစိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်အချို့ရက်များမှာမဆိုးလှပါ။
အပတ် ၄ ။ ကောင်းသောနှင့်မကောင်းသောနေ့ရက်များ 50:50 ဖြစ်ကြသည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုများစွာနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောခံစားချက်များရှိခဲ့သည်။ ဒီစိတ်အပြောင်းအလဲတွေအားလုံးငါ့မှာအကျွမ်းတဝင်ရှိလာတယ်။
အပတ်က 6: ကောင်းမကောင်းကိုရက်ပေါင်း 70 နေသောခေါင်းစဉ်: 30, porn ကိုကြည့်ဖို့အခြို့သောရမ္မက်, ဒါပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲ။ အောက်ပိုင်းလွှဲခွင်နှင့်အတူ swinging စိတ်ဓါတ်များချိန်သီး။
သီတင်းပတ် ၆ တွင်အရာအားလုံးပိုကောင်းလာသည်။ ငါနံနက်သစ်သားကိုပုံမှန် (စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကို) မရ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုချိန်းတွေ့ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်၊ ဒါနဲ့ငါ့ညီရဲ့ကင်မရာကိုငှားလိုက်တယ်၊ ဓာတ်ပုံတချို့လုပ်ပြီးချိန်းတွေ့တဲ့နေရာသုံးခုမှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။
အခုထိကောင်းနေတုန်းပဲ၊ ငါမမြင်ဖူးတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ချိန်းတွေ့တဲ့ site တွေကတော်တော်များများက porn sites တွေနဲ့တူတယ်။ သင်၏မြို့မှမိန်းကလေးအချို့ကိုရှာဖွေခြင်းကို ၂၃ နှစ်မှ ၃၀ ကြားစစ်ထုတ်နိုင်သည်။ သူတို့မှာအများအပြားရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာသေးငယ်တဲ့အရာများစွာရှိသည်။ သင်ပုံငယ်လေးကိုနှိပ်လိုက်သည့်အခါသူတို့ဓါတ်ပုံတွေ၏ပြခန်းများနှင့်အချို့ pics တော်တော်လေးပူသည် (အဝတ်အချည်းစည်းမဟုတ်သော်လည်း PMO 23 ပတ်ကြာပြီးနောက်သူတို့လုံလောက်သော) ။
ပြီးတော့ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ရဲ့ ဦး နှောက်ကပူပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးဓါတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုထင်သလဲ။ ဒါကမှန်တယ်! ... အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက် ... dopamine လွှတ်ပေးရန်! မကြာမီကျွန်ုပ်သည်“ အသစ်သောအရာများ” ကိုကြည့်ရှုရန်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတစ်ရက်အကြိမ်အကြိမ်ကြိမ် သွား၍၊ ၄၀ ရက်တွင်ပြန်လည်သက်သာသွားသည်
ထို့နောက်ငါပြန်ဖွင့်အတူလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ရရှိရန်တစ်လရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ porn နှင့်အတူသူတို့ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုသည်ရက်အနည်းငယ် relapses ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်မချက်ချင်းသူတို့အားချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါဟာငါပြီးသားတချို့မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူ chatting ခံသောကြောင့်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, နှင့်အနည်းဆုံးသုံးရက်စွဲများတစ်အလားအလာရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေတန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့ထား။
အခုငါပြန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီ၊ ဒီဟာငါ PMO မရှိတဲ့ငါ့ရဲ့နေ့ ၁၆ ရက်ပါ။ ပထမအပတ်မှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မအောင်မြင်ခဲ့တယ်။
ဒုတိယအပတ်တွင်ငါမကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောအခြားရောဂါလက္ခဏာများမှာပြင်းထန်သောစိုးရိမ်စိတ် (စိတ်ပျက်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အသုံးမကျဟုခံစားရခြင်း၊ တပတ်လုံးတုပ်ကွေးရောဂါတစ်ခု (ကျွန်ုပ်၏ reboot နှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်) တို့ဖြစ်သည်။
မနေ့ကညနေခင်းမှာဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးနီးပါးပြေသွားတယ်။ တုပ်ကွေးကြောင့်ငါလေ့ကျင့်လို့မရဘူး၊ ငါလည်းတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့အရမ်းပျင်းတယ်။ သို့သော်မနေ့က ၁၀ မိနစ်ဘာဝနာကိုမနေ့ကငါတွန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာကူညီပေးခဲ့သည်ပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါစိတ်ကျရောဂါကျော်လွန်သောကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၌စွဲလမ်းမှုလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်မကြာမီငါရှောင်ထွက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအကြောင်း - ကျွန်ုပ်သည်အစောပိုင်းကသွားရောက်ခဲ့သောဒုတိယယောဂသင်တန်းကိုမျှော်လင့်နေပါသည်။ ဒါဟာမကြာမီစတင်သင့်ပါတယ်။ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိန်းမတွေအများကြီးရှိတယ်။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌လူမှုဆက်ဆံရေးသည်ပိုက်ကွန်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအကျိုးရှိသည်။ အခုကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။
ငါခဲ့သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ရာထူးနှင့် ပတ်သက်. ကျနော့်သူငယ်ချင်းနှင့်အတူအချို့သောစာသားကိုနှိပ်နယ်ဖလှယ် နှင့်မည်သို့သူမကငါနှင့်အတူပါလိင်ချင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစကားစမြည်နောက်မှငါဖြေလျော့ပေးခြင်းခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းလာမယ့်နေ့ကငါစိတ်ကျရောဂါနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် (neurochemical ရက်နာ) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆိုးရွားခံစားမိလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ 100 = 1orgasm / 1porn ကလစ်ကြည့်ရှု fantasies ငါ့ကိုနားလည်ရန်ငါ့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်နောက်ဆုံးမှာသင်တူညီတဲ့ dopamine အလုအယက်ပေးပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ဆေးညွှန်းပါ။ သင်တစ်ဦးအမြန်ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်မိန်းမနှင့်ပင်လျှင်, ရှိသမျှလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ် !!!
30 နေ့ပုံပြင်: တိုးတက်မှုအများကြီးပိုချင်!
ကြောင်းမတိုင်မီကတစ်ဦးအကြောင်းကို 20 ကာလ၏ Streak နဲ့အကြောင်းကို 10 ကာလ၏တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှည်လျားသော relapses နှင့်အတူရက်အနည်းငယ်ထက်တခြားအဘယ်အရာကိုမျှလျော့နည်း၏ significant- ဌာန်း။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆက်စပ် (နှင့်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်) ငါအကြောင်းကို7လအကြာက porn စွန့်ပစ် / ဖျက်ပစ် / ပိတ်ဆို့ခြင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါဟာဒီနေ့ရက် ၃၀ ထိအရိုးစွဲနေတဲ့စိတ်ကူးယဉ် / ပုံရိပ်တွေ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတုန်းပဲ။ သူတို့ဟာအန္တရာယ်မကင်းဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်အဲဗာတန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကလိင်ကိစ္စကိုညစ်ညမ်းမှုထက်ဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ်လို့ EDC ကနေ“ ပြန်လည်နာလန်ထူ” ဖို့အချိန်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီးနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။.
လိင်စဉ်အတွင်း ED ကိစ္စများနှင့်အတူတစ်ဦးကခင်ပွန်း:
သငျသညျခေါ်ဆောင်သွားနှိုးဆွပေးခံရတဲ့အခါသင်သာလျှင်ရနိုင်ကြောင်းကိုသင်၏ tummy အတွက် yummy ခံစားမှုပေးသည်
သင်၏နှလုံးစည်းချက်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လမ်းမဆိုကြင်နာအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသက်ရှု / စေသည်
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ dopamine receptors တွေကိုသူတို့ချစ်ခင်တဲ့ဖျော်ရည်နဲ့ရေချိုးပြီး 'ပြည့်ဝ' အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ 'ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း' ကိုဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အကယ်၍ သူတို့ကိုတစ်ပတ်လောက်အငတ်ဘေးသင့်စေလျှင်၎င်းသည်ငါသာလျှင်ခဲယဉ်းသည်၊ ခက်သည်၊ ကြာရှည်မည်၊ ကောင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကျွန်တော်မအောင်မြင်သေးဘူး။ ငါဒါကိုငါးလလောက်ကြာအောင်လုပ်မိခဲ့တယ်။ တသမတ်တည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကအဲဒါကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့ပါ။
PMO-ED ခံစားနေသူမည်သူမဆိုကိုကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာသင်၏ဒစ်ကိုအလုပ်လုပ်စေလိုပါက PIV (လိင်အင်္ဂါမှလိင်တံ) အတွက်သင်၏လိင်မှုဆန္ဒပြည့်ဝမှုစနစ်များကိုသာသုံးပါ။ သင်၏လိင်စိတ်ကိုလက်ခံနိုင်သလောက်မကြာခဏ (သင်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ) စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားများမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။ ) PIV၊ PIM, PIA မှလွဲ၍ သင်၏လိင်တံကိုသင်၏ SO ထဲ၌ထည့်သွင်းလိုသည့်နေရာတွင်သာမကအစဉ်အမြဲဆန္ဒပြည့်နေစေရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်မေ့သွားသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစွဲလမ်းသူများဖြစ်ကြတယ်။ 'နည်းနည်း' လိုမျိုးအရာတော့မရှိဘူး။